Libreoffice 6 icharova madhesiki edu gore rino | Linux Vakapindwa muropa
Iko kuvandudzwa kweLibreOffice kunoenderera uye kunyangwe isu tisingawanzogashira makuru mavhezheni munguva pfupi yapfuura, chokwadi ndechekuti kukura kwayo kuri kupenyu kupfuura nakare kose. Mumazuva mashoma LibreOffice ichaburitsa vhezheni itsva inobudirira LibreOffice 5.4, asi harizove vhezheni yebazi rimwe chete asi richava bazi idzva.
Iyo itsva vhezheni yeakakurumbira hofisi suite haizove LibreOffice 5.5 asi ichave LibreOffice 6.0, riri bazi idzva iro rinosvika kuzvikwata zvedu mumwedzi inotevera.
Iyi shanduko mukuverenga inogona kuzivisa kuuya kwemabasa matsva uye anonakidza kuhofisi yemahara suite. Mune ino kesi isu tine iyo nyowani interface uye mitsva mabasa ayo akamirira uye ayo anosvika kuhofisi suite ne LibreOffice 6.
LibreOffice 6 ichave iine nyowani default interface
Iyo nyowani LibreOffice interface ikozvino yave kuwanikwa kune vese vashandisi, zvisinei iri sarudzo yekusarudza. Nekudaro, neLibreOffice 6 ino interface inogona kuve yekumisikidza interface uye iyo yechinyakare inogona kuve chimwe chinhu icho vashandisi chavanogona kusarudza. Iyo gore vhezheni zvakare chimwe chinhu icho vazhinji vashandisi vanotarisira kubva kuLibreoffice, chimwe chinhu chinogona kuuya neLibreOffice 6 uye izvo zvinogoneka sezvo Collabora isiri chimwe chinhu kunze kweshanduro yeLibreOffice pamwe neinodiwa gore mabasa.
Asi izvi zvese kungofungidzira sezvo isu zvisiri pamutemo tisingazive chero chinhu. Isu tinoziva chete kuti timu yeLibreOffice yakadzoreredza inotevera vhezheni yeiyo suite mune yayo Git repository, ichibva ku5.5.
Ini pachangu ndinoshandisa LibreOffice asi sevazhinji vashandisi, Ini ndinofunga hofisi suite yave kuita seisina basa, Kushomeka kwemabasa senge gore remabasa kana inovandudzwa uye yakagadziridzwa interface yemushandisi wekupedzisira. Zvinhu izvo zvatova nemasuti senge Google's, Microsoft's kana zvingori zvemaapplication anotibatsira muchiitiko chedu kubva chero kupi. Tichafanirwa kumirira kuti tione zvakaita LibreOffice 6 nyowani, asi zvese zvinoratidza kuti ichave inonakidza vhezheni Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Libreoffice 6 iri kuuya kumatafura edu gore rino
Diego Retero akadaro
Ini handibvumirane zvachose kuti iyo yechinyakare nharaunda inofanirwa kuchinjwa, sarudzo dziri nyore kwazvo kupfuura munzvimbo "dzemazuva ano" idzi.
Sangano rine musoro uye nekudaro mabasa ese anowanikwa pasina matambudziko.
Pindura Diego Retero
Ini ndoda simba rakawanda, kuwanda kuumbana nemafomati epfuma, fomu rekushandisa onenote uye imwe mhando muparidzi zvakare kugadzirisa mukukwezva nekukwevera nekukasira uye nyore kugadzirwa kwemawatermark chimwe chinhu chakafanana neyakaverengeka starmart uye zvakajairidzwa mumafomu emahara.
Ufff ... vamwe vanoda yakawanda, ndeyechokwadi kuti vanobatana zvishoma, kana kwete zvachose.
Ndiri kusekedzwa nevanhu vanogara zvakanaka neiyo interface kubva makore makumi maviri apfuura, iyo yakawanda compact uye intuitive zvirinani uye omnibarra iri zvakapetwa kakapetwa kane pane iyo crappy interface iyo yaishandiswa muHofisi 20.
Pindura kuna Acerty
Chinhu chinofanirwa kugadzirisa ndiko kuverenga kwemagwaro akachengetwa mu cd, nekuti neoffreoffice 5.4.2 hazviite. Ini ndakazviedza pane akasiyana distros uye hapana, saka ndaifanira kuisa libreoffice 5.3.6 uye kana ndichigona kuverenga office .dox uye .odt mafaera (akashandisa distros: ubuntu16.04, maui linux, antergos, Voyager, kubuntu, kde neon )
Lucas matias gomez akadaro
Zvakanaka ipapo beta iri pano saka ngatiedzei….
Pindura kuna Lucas Matias Gomez